Beijing kuBelgrade: Inanga ndege kuHainan Airlines
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Beijing kuBelgrade: Inanga ndege kuHainan Airlines
Airlines • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • nhau • Slovenia Kuvhuna Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Ndege yekutanga yebasa idzva, Hainan Airlines HU7937, yakasimuka kubva kuBeijing Capital International Airport, yakasvika zvinobudirira kuBelgrade Nikola Tesla Airport ku 9: 20 am on September 15, 2017 yenguva nguva mushure memaawa gumi nematatu mumhepo. Mhemberero uye yekucheka ribhoni yemhandara yendege yakapindwa neMutungamiriri we Serbia Ana Brnabic, Mutevedzeri weGurukota uye Gurukota Rezvekuvaka Zorana Mihajlović, Mumiriri weChinese kuSerbia Li Manchang, Hainan Airlines Mutevedzeri weMutungamiri Quan Dong uye manejimendi kumafemu akati wandei eChina ane mashandiro muSerbia pamwe neboka revakuru vemuno maindasitiri nevatungamiriri.
Mutungamiriri weSerbia Ana Brnabic akadaro mukutaura kwake kuti danho rekushandira pakati China uye Serbia yakanga yakura zvakanyanya, iine huwandu hwakazara hwemapurojekiti pakati penyika mbiri dziri kuitika zvakanyanya US $ 6 billion, nepo, panguva imwecheteyo, kutengeserana kwenyika mbiri kuri kuwedzera zvakanyanya. Mumiriri weChinese kuSerbia Li Manchang akati zviitiko zvitsva zvinobuda zuva rega rega pakati penyika mbiri idzi uye kumutsiridzwa kwesainzi yemhepo pakati pemisoro miviri iyi chimwezve chiratidzo chesimba riri kukura rehukama. Mukuenderana ne China's Rimwe Bhandi, Imwe nzira yekutanga, Hainan Airlines inoronga kuenderera mberi ichiwedzera kuvepo kwayo kunze kwemusika wayo wepamusha, kunyanya munyika dzeCentral uye Eastern Europe, mazhinji acho akatotanga hukama hwepedyo ne China, akadaro Quan Dong.
Mumakore achangopfuura, Hainan Airlines yakawana nekukurumidza kuwana mukusvika kwayo kwepasirese, nechikamu chemari chakakonzerwa nechikamu chepasi rose chiri kukura gore negore. Muhafu yepiri yegore rino, kuwedzera kune iyo Beijing-Prague-muBelgrade uye Shanghai-Tel Aviv masevhisi ayo atove kushanda, Hainan Airlines yakarongerwa kutanga zvakare Shanghai-kweBrussels, Shenzhen-Brisbane, Chongqing-New York, Chengdu-New York, Shenzhen-Brisbane uye Shenzhen-Cairns masevhisi pamwe nedzimwe nzira dzinoverengeka dzekupindirana, zvichiwedzera kuwedzera mutakuri wepasi rese network pasi rese.